बाइबलका कथाहरू: मोशा पहरामा हिर्काउँछ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अटेसो अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काचिन काजाक काबाइली काबार्डिन-सर्केस काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी केक्ची कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिभ टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नुएर नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बम्बारा बाओले बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलफ वोलाइटा शोना श्वा सर्बियन साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
दस वर्ष, २० वर्ष, ३० वर्ष गर्दै समय बित्दै जान्छ। इस्राएलीहरू उजाड-स्थानमा भौंतारिएको अब त ३९ वर्ष भइसक्यो। तर यत्तिका वर्षसम्म यहोवाले आफ्ना जनहरूको हेरविचार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले खानका लागि मन्न दिनुहुन्छ। उनीहरूलाई दिउँसो बादलको खम्बाले अनि रातिचाहिं आगोको खम्बाले डोऱ्याउनुहुन्छ। उजाड-स्थानमा त्यत्ति धेरै समय बिताए पनि उनीहरूको लुगा फाट्दैन। उनीहरूको खुट्टा पनि दुख्दैन।
मिश्र छोडेको ४० औं वर्षको पहिलो महिनातिर इस्राएलीहरू फेरि एकपल्ट कादेशमा छाउनी लगाएर बस्छन्। लगभग ४० वर्षअघि कनान देशमा जासुस पठाउँदा पनि इस्राएलीहरू यही ठाउँमा थिए। मोशाकी दिदी मरियम कादेशमै मर्छिन्। कादेश पुग्ने बित्तिकै इस्राएलीहरू फेरि पहिलेझैं गनगन गर्छन्।
उनीहरूले कतै पानी पाउँदैनन्। यसकारण उनीहरू मोशासित गुनासो गर्न थाल्छन्: ‘हामी मरेको भए बरु बेस हुन्थ्यो। हामीलाई मिश्रबाट किन केही पनि नउम्रने यस्तो सुख्खा ठाउँमा ल्याउनुभयो? यहाँ एक गेडो अन्न छैन, नेभारा छैन, अंगुर छैन, अनार छैन। पिउने पानीसमेत छैन।’
मोशा र हारून बासस्थानमा यहोवालाई बिन्ति गर्न जाँदा यहोवाले मोशालाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘इस्राएलीहरूलाई जम्मा गर्। तब तिनीहरू सबैको सामुन्ने त्यहाँ भएको पहरालाई हुकुम गर्। तिनीहरू र तिनीहरूका जम्मै गाईवस्तुका लागि त्यहाँबाट पुग्दो पानी निस्कनेछ।’
यसकारण मोशाले इस्राएलीहरूलाई जम्मा गर्छ र भन्छ: ‘सुन, ए परमेश्वरमाथि भरोसा नराख्ने मान्छेहरू हो! के हारून र मैले तिमीहरूका लागि अब यो पहराबाट पानी निकाल्नुपऱ्यो?’ त्यसपछि मोशाले पहरालाई दुई चोटि लट्ठीले हिर्काउँछ र त्यहाँबाट पानीको ठूलो धारा बग्न थाल्छ। जम्मै इस्राएलीहरू अनि उनीहरूको पाल्तु पशुहरूले प्रशस्त पानी पिउन पाउँछन्।
तर मोशा र हारूनसित यहोवा रिसाउनुहुन्छ। किन तिमीलाई थाह छ? किनभने मोशा र हारूनले पहराबाट पानी निकाल्दा हामीले गरेको भनेका थिए। तर पहराबाट त यहोवाले पो पानी निकाल्नुभएको थियो। मोशा र हारूनले इस्राएलीहरूसित साँचो कुरा नगरेको हुँदा यहोवाले उनीहरूलाई सजाय दिनुहुन्छ। उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: ‘तिमीहरू दुवैले मेरा प्रजा इस्राएललाई कनान देशसम्म पुऱ्याउन पाउनेछैनौ।’
चाँडै नै इस्राएलीहरू कादेश छोडेर अघि बढ्छन्। केही समयपछि उनीहरू होर पर्वतनजिक आइपुग्छन्। यही पर्वतमा हारूनको मृत्यु हुन्छ। त्यसबेला उसको उमेर १२३ वर्षको हुन्छ। इस्राएलीहरू धेरै दुःखी हुन्छन् र ३० दिनसम्म उनीहरू हारूनका लागि रुवाबासी गर्छन्। त्यसपछि, हारूनको छोरा, एलाजार इस्राएली जातिको दोस्रो प्रधान पूजाहारी बन्छ।
गन्ती २०:१-१३, २२-२९; व्यवस्था २९:५.
उजाडस्थानमा यहोवाले कसरी इस्राएलीहरूको हेरविचार गर्नुहुन्छ?
कादेशमा पुग्ने बित्तिकै इस्राएलीहरू के भन्दै गनगन गर्छन्?
यहोवाले इस्राएलीहरू र तिनीहरूका बगालको लागि कसरी पानी निकाल्नुहुन्छ?
औंलाले आफैलाई देखाउने को हो र ऊ के गर्दैछ, चित्र हेरेर बताऊ।
मोशा र हारूनसित यहोवा किन रिसाउनुहुन्छ? तिनीहरूले कस्तो सजाय पाउँछन्?
होर पर्वतमा के हुन्छ र त्यसपछि को इस्राएलको प्रधान पूजाहारी बन्छ?
गन्ती २०:१-१३, २२-२९ र व्यवस्था २९:५ पढ्नुहोस्।
यहोवाले उजाडस्थानमा इस्राएलीहरूको हेरविचार गर्नुभएको घटनाबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (व्यव. २९:५; मत्ती ६:३१; हिब्रू १३:५; याकू. १:१७)
मोशा र हारूनले इस्राएलीहरू सामु उहाँको प्रशंसा गर्न बिर्संदा यहोवाले त्यसलाई कसरी लिनुभयो? (गन्ती २०:१२; १ कोरि. १०:१२; प्रका. ४:११)
यहोवाले दिनुभएको अनुशासनप्रति मोशाले देखाएको प्रतिक्रियाबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौं? (गन्ती १२:३; २०:१२, २७, २८; व्यव. ३२:४; हिब्रू १२:७-११)